ဖာသည်မ စကားလုံး ဖြင့်ပင်အားမရနိင်ကြောင်း မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော် ၀ီရသူမိန့်ကြား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Cardinal-elect Charles Maung Bo, “The wounds in this country are deep”
ပေါင်းစည်းခြင်း(Integration) ၏ ရလာဒ် »
သူ့(ရန်ဟီးလီ)ကို ပြည့်တန်ဆာထက်ရင့်သီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းရှိရင် ဦးပဉ္စဇင်းက အဲ့ဒီ့စကားလုံးထက်တောင်မှ သုံးနှုန်းလုိုက်ချင်သေးတယ်။
ဟိန်းအောင် ဇန်န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅
ကုလလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စစ်ရန်ဟီးလီအား “ဖာသည်မ” ဟူသောစကားလုံးဖြင့်သာသုံးနှုန်းလိုက်ရခြင်းကို မိမိအနေဖြင့် အားမလုိုအားမရဖြစ်မိကြောင်းနှင့် အဆိုပါစကားလုံးထက်ပင်ပိုမိုပြင်းထန်သည့်အသုံးအနှုန်းမျိုး သုံးနှုန်းလုိုကြောင်း ဆရာတော်ဦးဝီရသူက7Day Daily သတင်းစာ သို့မိန့်ကြားလိုက်သည်။
“သူ့(ရန်ဟီးလီ)ကို ပြည့်တန်ဆာထက်ရင့်သီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းရှိရင် ဦးပဉ္စဇင်းက အဲ့ဒီ့စကားလုံးထက်တောင်မှ သုံးနှုန်းလုိုက်ချင်သေးတယ်။ဦးပဉ္စဇင်းက အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လုပ်နေတာ။အဲဒီအတွက် အစွန်းရောက်တယ်လုို့ပြောလည်းသီးခံနိင်တယ်။အကြမ်းဖက်သမားလုို့ပြောလည်းလက်ခံတယ်။သူ(ရန်ဟီးလီ)ကျူးလွန်တာနဲ့စာရင် ဦးပဉ္စဇင်းက ပြည့်တန်ဆာလို့သုံးနှုန်းတာတောင် အားမရဘူး”ဟု ဓမ္မာစရိယ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ်7Day Daily သတင်းစာ No 630 တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စစ်ရန်ဟီးလီ နှင့် ကုလသမဂ္ဂတုို့၏ တုိုက်တွန်းပြောကြားချက်များအား အင်အား ၅၀၀ ခန့်ဖြင့်ဆန့်ကျင်သည့်ပွဲတွင် မန္တလေးမစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဓမ္မစရိယ ဆရာတော် ဦးဝီရသူက မစ္စရန်ဟီးလီအား ဖာသည်မ ဟူသောအသုံးအနှုန်းအပြင် အခြားရင့်သီးသည့်အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ပြောဆုိုဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“….ကုလသမဂ္ဂထုိုင်ခုံပေါ်ရောက်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လူကြီးလူကောင်းလို့ အောက်မေ့မနေနဲ့။ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်တုို့နိင်ငံအတွက်တော့ ဖာသည်မပဲဗျ၊ခင်ဗျားစိတ်ပါလုို့ ချင်ဗျားကုလားကိုဖင်ပေးပါ….”ဟူသောရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသည့်စကားလုံးများဖြင့် ဆရာတော်ဦးဝီရသူက ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တရားမ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည့် ၉ ၆၉ ဂိုဏ်းနှင့် မဘသ အဖွဲ့တွင် ဦးဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည့် ဦးဝီရသူသည် ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ကကျင်းပသည့်ရေနံချောင်းတရားပွဲအပြီးတွင်လည်း ဒေသခံများက မကောင်းဆိုးဝါးနှင်သည့်ဓလေ့အတိုင်း သံပုံးတီးတောထုတ်ဆန့်ကျင်မှုကိုကြုံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
ကိုးကား7Day Daily No. 630(Wednesday ,January 21. 2015) Page B7
This entry was posted on January 21, 2015 at 1:36 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.